Mourinho Oo Xaqiijiyey Maqnaanshaha Cech & Terry Ee Ciyaarta Liverpool
HomeWararka MaantaMourinho Oo Xaqiijiyey Maqnaanshaha Cech & Terry Ee Ciyaarta Liverpool
Jose Mourinho ayaa daboolka ka qaaday in goolwade Petr Cech ay soo gabo gabowday rajadii uu ka qabay ciyaarista ilaa dhamaadka xili ciyaareedkan , sidaasna uu kaga maqnaanayo kooxda inta ka dhiman horyaalka kadib dhaawac garabka ka soo gaadhay ciyaartii Atletico Madrid.
Cech ayaa uu hoosta ka gallay oo lugaha isaga qaaday ciyaaryahanka Raul Garcia ciyaartii barbar dhaca gool la’aanta ah ku dhamaatay ee Chelsea la gashay Atletico Madrid xallay, isla markiibana loo qaaday cusbitaalka si sawirka lafaha loo mariyo.
Terry, ayaa sidoo kale, si foolxun uu kuraanta uga laagay Diego Costa daqiiqadii 71 aad ee ciyaarta. Kabtanka kooxda Chelsea ayaa isku dayay inuu sii wato ciyaarta laakiin dhaqaaqii awoodi waayay , isla markaana bedel khasab ah lagu sameeyey.
“Xili ciyaareedkii Petr Cech wuu dhamaaday,” ayuu ciyaarta kadib Mourinho ku yidhi saxaafada.
“Arinta John [Terry], waa inaanu kulanka Finelka ciyaarnaa isagoo nala socda.”
Labadan ciyaaryahan ayaa ka maqnaan doona kulanka maalinta Axada ah ee horyaalka Premier League title Chelsea kula ciyaari doonta Liverpool garoonka Anfield, iyo sidoo kale ciyaarta is araga labaad ee Champions League ay Stamford Bridge ku marti gallin doonaan Atletico Madrid, bisha April 30.
John Obi Mikel iyo Frank Lampard ayaa sidoo kale ka maqnaan doonaa ciyaarta kulanka labaad kadib markii labadaba digniin la siiyey kulankii xallay , laakiin waxa isagu soo xaadiri doona Branislav Ivanovic oo ka maqnaa ciyaartii xallay.